Leli fulethi elithokomele, elingasemanzini, elihlonishwayo, elivikelekile elitholakala endaweni ezolile ye-Admiralty way, i-Lekki Phase 1 Lagos State iyindawo ekhethwayo yabahambi bezinkampani, umndeni kanye nabahamba bezokungcebeleka njengoba ikunikeza amakamelo okulala amathathu (3) asesitayeleni wonke en. -suite enezindawo zokupaka ezi-2. Izivakashi ziqinisekile ukuthi zizothola izinsizakalo ezinhle kakhulu nokunethezeka.
- 24hrs Amandla/Ezokuphepha
- Indawo yokubhukuda
-65 I-Smart TV
- Isevisi ye-Wi-Fi yamahora angu-24
- Ukuphepha kwe-Premium
Leli fulethi elithokomele, elingasemanzini, elihlonishwayo, elivikelekile elitholakala endaweni ezolile ye-Admiralty way, i-Lekki Phase 1 Lagos State iyindawo ekhethwayo yabahambi bezinkampani, umndeni kanye nabahamba bezokungcebeleka njengoba ikunikeza amakamelo okulala amathathu (3) asesitayeleni wonke en. -suite enezindawo zokupaka ezi-2.
Kuyimizuzu emi-2 ukuya kwengama-5 kuphela ukuya ezindaweni ezisemfashinini njengenxanxathela yezitolo, izindawo zokuzijabulisa nezindawo zokudlela ezithandwayo njenge...Sailors lounge, Labule, E-Bar, Blackbell Lounge, Debonairs Pizza, Dominos Pizza, Wine Bank, Bay Lounge, Prince I-Ebaino, i-Upbeat Center nokuningi...
Izivakashi ziqinisekile ukuthi zizothola izinsizakalo ezihamba phambili nokunethezeka.
Leli fulethi liyindawo ekhethwayo yezinkampani, umndeni kanye nabavakashi bezokungcebeleka njengoba likunikeza amakamelo okulala amathathu (3) asesitayeleni wonke ama-en-suite futhi likubeke eduze nezitolo, indawo yokudlela nokuzijabulisa ngenkathi isendaweni ehlonishwayo, evikelekile futhi enesizotha. Lekki isigaba 1 Lagos State. Izivakashi ziqinisekile ukuthi zizothola izinsizakalo ezihamba phambili nokunethezeka.
I am available text.uma udinga noma yini,ngithumele umlayezo nganoma imiphi imibuzo, izinkathazo noma ugcwalise ngazo zonke izinto ezinhle ongazenza lapha.Kusukela ngesesibili ubhukha nathi kuze kufike lapho uphuma,sikhona ukuze uqiniseke ukuthi unokuhlala kahle futhi ukhululekile.
I am available text.uma udinga noma yini,ngithumele umlayezo nganoma imiphi imibuzo, izinkathazo noma ugcwalise ngazo zonke izinto ezinhle ongazenza lapha.Kusukela ngesesibili ubhu…